Lee igwe mmadụ: Trump bụ 'taekwondo master' ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » ndị mmadụ » Lee igwe mmadụ: Trump bụ 'taekwondo master' ugbu a
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Akụkọ South Korea na -agbasa • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Trump kwuru na ya ga-eyi uwe taekwondo na Congress Congress ma ọ ga-alaghachi na White House n'ọdịnihu.
Lee Dong-seop, onye isi oche Kukkiwon nke dị na Seoul, nke a makwaara dị ka World Taekwondo Headquarters, enyela Donald Trump eriri ojii nsọpụrụ na taekwondo, n'ihi “mmasị Trump nwere na nka agha.”
Enyere eriri na asambodo nke achọsiri ike trump na Fraịde na Trump's Mar-a-Lago obibi na Florida.
Akara ojii na-egosi onye isi ala US mbụ dị ka 'Dan nke itoolu', ọkwa kachasị elu enwere ike nweta na nka agha.
“Ọ bụ obi ụtọ na nsọpụrụ m ịnata asambodo nkwanye ugwu a. Taekwondo bụ ọmarịcha nka maka ichebe onwe gị n'oge ndị a. trump kwuru.
Onye bụbu onye isi ala US kwuru na ya ga-eyi uwe taekwondo na US Congress ma ọ laghachite na White House n'ọdịnihu. Trump kpọkwara ndị otu Kukkiwon ka ha mee ngosi ngosi taekwondo na US.
O doro anya na Lee rịọrọ Trump nkwado na nkwado ya na Kukkiwon na nka ịgba egwu.
Dị ka webụsaịtị Kukkiwon siri kwuo, nkwalite ruo ọkwa kachasị elu chọrọ onye ndoro-ndoro ka ọ gụchaa ma ọ dịkarịa ala afọ itoolu nke ọzụzụ wee nyefee akwụkwọ akụkọ nwere ibe 10 kacha nta na "Taekwondo Life" ma ọ bụ "Taekwondo Spirit."
Ngosipụta pụtara trump Ugbu a na-ekerịta otu ọkwa dị ka dike ya - onye ọchịchị onye Russia bụ Vladimir Putin, onye e nyere eriri ojii nsọpụrụ ma mee nnukwu nna ukwu nke taekwondo n'oge nleta gọọmentị na South Korea na 2013.